Labo Nabaddoon Oo Xabsiga la dhigay. - Awdinle Online
Labo Nabaddoon Oo Xabsiga la dhigay.
November 30, 2019 (Awdinle Online) – Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari,Wararka Naga soo gaaraya ayaa sheegaya in halkaasi lagu xiray laba kamid ah Nabaddoonada gobolka Bari oo dhalaliil horay u dhaliilay nidaamka Maamul ee Madaxweynaha Siciid Cabdulaahi Deni.
Labada Nabaddoon oo lagu kala magacaabo Diraac Yuusuf Buuxe iyo Cawad Maxamed Faarax, ayaa kamid ahaa odoyaal ku sugan Boosaaso oo shalay Maamulka Puntland ku dhaliilay heshiisyo ay sheegeen in ay la gashay Imaaraadka Carabta.
Odoyaasha ayaa sidoo kale sheegay in ay ka soo horjeedan, Heshiiska DP world iyo garoonka diyaaradaha Boosaaso oo lagu wareejiyay shirkad laga leeyahay dalka Isku taga Imaaraadka Carabta, sida ay sheegeen.
Saraakiil ka tirsan laamaha Amniga gobolka Bari, ayaa xaqiijiyay xariga labada Nabaddoon, waxaana ay sheegeen in hadda loo dhaadhiciyay xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso.
Nabaddoonada ayaa mid kamid ah xalay gurigiisa laga qabtay, halka kan kalena saaka suuqa laga qabtay, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha laamaha amaanka Puntland.
Mudooyinkaan dambe waxaa ka taagnaa Magaaladda Boosaaso doodad ka dhalatay heshiisyo Madaxweynaha Puntland uu lagashay Shirkado ganacsi oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta.
Previous articleUNOCHA: Dadka Soomaaliyed Oo Waxyeello Kasoo Gaartay Fatahaadihii
Next articleDab ka kacay Degmada Afgooye